आफुसंग बिहे गर्न नमानेपछि यसरी तातो तेल खनायो, घुस लिनु सामान्य हो भन्छन् बिरगञ्जका प्रहरी ! सिधाकुरा जनतासंग ( भिडियो सहित हेर्नुहोस) – पुरा पढ्नुहोस्……
आफुसंग बिहे गर्न नमानेपछि यसरी तातो तेल खनायो, घुस लिनु सामान्य हो भन्छन् बिरगञ्जका प्रहरी ! सिधाकुरा जनतासंग ( भिडियो सहित हेर्नुहोस)
आफुसंग बिहे गर्न नमानेपछि यसरी तातो तेल खनायो, घुस लिनु सामान्य हो भन्छन् बिरगञ्जका प्रहरी ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
आफूसँग बिहे गर्न नमानेको भन्दै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका एक युवकले छिमेकी गाउँकी युवतीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका–११ भुजेलाका राकेश चन्दले सोही नगरपालिका ५, वनगाउँकी २३ वर्षीया सुनिता चन्दमाथि बुधबार कुटपिट गरेका हुन् । उनले सुनिताको आँखा औंलाले घोचिदिनुका साथै शरीरमा तातो घिउ खन्याइदिएका छन् ।
तातो घिउले शरीरका विभिन्न भाग जलेको छ भने आँखा सुन्निएर टालिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित आँखा अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि युवतीलाई धनगढीको गेटा आँखा अस्पताल रिफर गरिएको छ । आँखा बढी सुन्निएकाले त्यहाँ पनि तत्काल उपचार हुन सकेन ।
मुलुकको न्यायलयको यति उपहास भयो कि चोक चोकका भट्टी पसलमा खोयाबिर्के खानेहरुको समेत सितन बन्यो प्रधानन्याधीश काण्ड ।
देशको न्यायलयको विवाद सदनमा हुनु पर्नेमा सडकमा हुनपुग्यो । आफ्ना आफ्ना स्वाद अनुसार न्यायलयको अझ भनौ प्रधानन्याधीशको व्याख्यामा मानिसहरु र संघ संस्थाहरु ज्यान फालेर लागे ।नयाँ नयाँ जन्ममितिहरु सँगै नयाँ नयाँ तथ्य र तर्कहरुले बजार ताते ।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायधीशलाई किक आउट शैलीमा निलम्बीत ग¥यो । टेलिभिजनको पर्दामा एकै पटक २ वटा ब्रेकीङ न्युज चल्यो । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथग्रहण गराई रहँदा सपथ खुवाउने प्रधानन्यायधीशनै निलम्बीत भएको खबर आयो ।
निलम्बीत प्रधानन्याधीश बाट खुवाइएको सपथ जुठो भएको तर्क सर्वत्र चल्यो । अन्ततः प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको रजीनामा नै आयो । न्याय क्षेत्रले इतिहासमै सर्वाधिक बिवादको सामना गर्नु प¥यो ।
आखिर राजनीतिक भागबण्डाबाट न्यायमुर्ती छान्नुको कलबिषको तितो सबैले चाखे । फलस्वरुप सम्मानको उच्च स्थानमा हुनुपर्ने देशको न्यायलय बिवादको निचो र होचो सतहमा पछारियो ।
प्रधानन्याधीश वा न्यायाधीशहरु आँफु निकट भैदिए फाइदै फाइदा देख्नेहरुको हुलले न्यायालय दलालहरुको जुवा अड्डा भएको छ । पैसामा न्याय बिक्री हुन्छ भनेर सय पटक भनि सकियो, हजार पटक भनिन्छ र अर्को लाख पटक भन्न छोडिदैन ।
स्वार्थीहरुको जालमा न्यायलय नफसेको भए मुलुकमा त्यती ठुलो कर छली सम्भव थिएन । जनताको आस्था न्यायलय प्रति डगमगाएको मात्र छैन गल्र्याम गुर्लुङ ढलेको छ ।
जीवन भर न्यायको भिख मागेर अनुहारमा असिवटा मुजा परेकाहरुको आँखामा आँखा जुधाएर हेर्ने न्यायाधीशहरु कहाँ भेटीएलान् ?
२/४ कालाकोटेहरुले स्यालले र्झै विठ्याइ गरेर भगवानलाई समेत थाहा नहुने गरी न्यायधीश किनिदिन्छन् ।
न्याय, अन्याय ड्याङकी ड्याङ बिक्छ । समय समयमा न्यायलयको बेथिती छानविन गर्न बनेका समितिहरु र तिनले दिएका प्रतिवेदनहरु यस कुराको गतिलो प्रमाण हुन ।
पैसा हुनेले हत्तपत्त केश हार्नै पर्दैन । हुन त पक्ष र विपक्षका वकिलहरु नै कुरा मिलाएर चियर्स गर्ने भैसकेपछि सारा दोष न्यायललाई जाँदैन तर विचौलियामुक्त न्यायलयको कल्पना गर्न सक्ने हैशियत हाम्रा न्यायलयहरुले राखेको दिन कुनै फटाहा कालो कोेटेले गरीबको घरखेत खाइदिन पाउँदैनथ्यो ।
आफ्नै जन्म मिती, शैक्षिक प्रमाणपत्र र चारीत्रिक प्रमाणपत्रको विवादले थला परेको न्यायलयले लाखौँ सर्वसाधारणलाई समय मै न्याय देला भनेर आशा गर्नु आँफै प्रती अन्याय हुन जान्छ ।
यही अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको मानहानी भयो भने माफ पाउं श्रीमान । तर अदालतको वरपर बसेर जनताका मुद्धाको मोलतोल गरीरहेका वकम्फुसे विचौलीयाहरुले न्यायलयको इज्जत, माटोमा मिलाउन लागि सकेपछि कमसेकम म यति आवश्यकता परे यो भन्दा अझै अलिकति बढी सम्म चाँही बोल्न पाउँ है श्रीमान ।
बाँकि तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्
Prevआफ्नै जन्म मिती र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादले थला परेका न्यायलयले लाखौँ सर्वसाधारणलाई न्याय देला भनेर के आशा गर्नु !
Nextऋषि धमलाका लागी बन्यो गीत्! साँच्चै ईङ्लिस नजान्या हो र चिच्याई चिच्याई भनेउ हिन्दिमा नजान्या भा A, B, C अब पढ है ऋषि (भिडियो सहित)
म शिकारु हुँ, सिक्ने क्रममा छु, म भूईबाट नै पलाएको हुँ, मेरो धरातल र पृष्टभूमि कहिले भुल्दिन र भुल्ने छैन : रवि ओडले किन लेखे यस्तो ?
सशस्त्र प्रहरीले डोजर लाएर धमाधम चर्चहरु भत्काउन सुरु, हाम्रो सांस्कृति माथि नै हमला भएको भन्दै चर्च बन्द गर्ने नीति शुरु (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाको यस्तो महान अभियान , सैले एकपल्ट हेरेर सक्दो शʼयर गरौं…